Loltoonni Naayijeriyaa garee jihaadistootaa soortu jechuun garee gargaarsaa cufsiisan - BBC News Afaan Oromoo
Loltoonni Naayijeriyaa garee jihaadistootaa soortu jechuun garee gargaarsaa cufsiisan
Loltoonni Naayijeriyaa dhaabbattoota gargaarsaa idil addunyaa kaaba baha biyyatiitti milishoota Boko Haraam deegaru jechuun akka hojiisaanii dhaban taasifaman.
Akka jedhanitiis dhaabbanni Akshin Ageeyinast Hanger [Action Against Hunger] riphee loltoota isilaamaaf nyaataa fi qorichaa dhiyeessaa turan.
Dhaabbileen mit-motummaa gama isaatiin himannaa irratti dhiyaate kufisuun, loltoonni waajirasaanii kan Maiduguri magaalaa bulchiinsa Borno keessatti argamu akeekachiisa duraa tokko malee cufuu himaniiru.
''Murteen kunis sochii dhaabbatichi beela hirrisuuf bulchiinsa godina Borno keessatti taasisu irratti danqaa taha jedhan.
Sochiin namoota beela'aniif deeggarsa dhiyeessuu dhaabbileen kunneen taasisaa turanis namoota miliyoonota Maiduguri, Monguno fi Damasak keessatti argamaniif deegarsa taasisaa kan ture dha,'' jechuun ture Royitarsi kan gabaase.
Motummaan Naayijeriyaa buufata TV dhuunfaa cufe
Himannaan loltootaan irratti dhiyaate baayyee cimaadha. Wayita akkasiin ifatti maqaa dhaabbilee gargaarsaa nageenya biyyattii cabsuu isaaniifi dhaabbilee shororkessuummaan himataman waliin hojjachuuf himataman kun kan jalqabaati.
''Dhaabbileen miti motummaa Sochii Farra Beelaa [Action Against Hunger] jedhaman kunneenis gocha deeggarsa riphee loltootaa fi shororkeessitootaas taasisan akka dhaabaniif irra deddeebbin itti himamulleen didaniiru,'' jedha ibsi dhaabbanni oduu Royitarsi caqase tokko.
Loltoonni akka jedhanittis himannaa isaa kanaaf ''ragaa basaasaa qabatamaa'' qaba.
Milishoonni Boko Haraam waggoota 10 darbaniif kaaba -baha Naayijeriyaa keessatti gaggeessaa kan ture yoo ta'u, gochi kunis Chaad, Nijar and Kaameruun irrattis dhiibbaa taasisaa jira.
Haala kanaanis lammiilee nagaan kumaatamni kan ajjeefaman yoo ta'u, kanneen miliyoona lamaa ol ta'an ammoo walitti bu'insichaan bakka jirenyaasaanii baqataniiru.
Garee kunis barattoota mana barumsaatii ukkaamsanii butuun, keessattu gocha buttaa shamarran 200 ol bara 2014tti magaalaa Chibok kan Borno naannoo biyyatti lafa gareen milishaa kunneen keessa socho'an keessaatti gaggeeffameen mata dure midiyaalee idi addunyaa ta'u danda'eera.
Shamarran haleellaa hidhattoota Bookoo Haraam jalaa baraaraman
Namni lubbuun hin jirre dogogoraan miseensa boordii ta'uu filame